Fitaovana fanaka plastika namboarina tany Sina, Anti - Tip Strap, mpanamboatra strap furnitures - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd
Qiaofeng dia nifantoka tamin'ny fanaka lehibe, jiro, elektronika, kilalao ary indostria hafa hanomezana vokatra sy kojakoja plastika.
antsipirihany â – ¶
Teknolojia tena tsara
Qiaofengafaka manome famolavolana sy fanamboarana bobongolo, famolavolana tsindrona, fanodinana ary fanangonana serivisy mirindra.
Manome vahaolana mahomby sy malefaka ho an'ny mpanjifa isan-karazany eran'izao tontolo izao izahay.
Ireo mpanjifan'ny orinasa manerantany, ary manantena fatratra ny hiara-hiasa aminao!
Sari-mofo ABS vatasarihana
M10 manamboatra tongotra ho an'ny fanaka
24W valin'ny familiana fiara fitaterana plastika abs
7 * 30mm plug fanitarana PE
Mpiaro zoro plastika maharitra 120mm maharitra
Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd, natsangana tamin'ny taona 2008. Hatramin'ny nanombohany, ny orinasa dia nifantoka tamin'ny fanaka lehibe, jiro, elektronika, kilalao ary indostria hafa mba hanomezana vokatra sy kojakojam-plastika. kojakoja, kojakoja plastika tariby mitondra fiara mpamily, fialam-boly fanoherana, vatofantsika fanitsiana, tongotra haingam-pandrefesana, mpiaro zorony plastika, fanaraha-maso lavitra, lampozy, fehy tariby, fonosana, fanaka / jiro / fifandraisana elektronika ary kojakoja mifatotra, sns. manerana an'izao tontolo izao. Ny orinasa dia manana milina famolavolana tsindrona mandroso sy fitaovana famokarana bobongolo vita amin'ny plastika, izay afaka manome serivisy fampidirana ny famolavolana sy ny famokarana bobongolo, ny famolahana ny tsindrona, ny fanodinana ary ny fivorian'ny ekipa OEM / ODEM. hanome anao ny vidiny sy serivisy tsara indrindra izahay.
Ny fanaka plastika dia nanjary hery vaovao teo amin'ny sehatry ny fanaka
Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fangatahana fiarovana ny tontolo iainana, ho avy ny vanim-potoana "miaraka amin'ny hazo plastika", ny fanaka plastika misy fampiharana miloko matevina ary ny endrika endrika lamaody dia lasa hery vaovao amin'ny indostrian'ny fanaka.
Mila mampiasa inona ny kojakojam-pitaovana fanaka ao amin'ny birao?
Ny kojakoja plastika plastika dia matetika ampiasaina amin'ny fiainana, fanaka sasany no hampiasaina, fa mitana andraikitra lehibe ihany koa, ny fanaka amin'ny birao dia manondro ny fanaka sahaza ho an'ny birao, ary ny famokarana sy ny famokarana dia mbola mila fanohanan'ny kojakoja, avy eo kojakoja...
Ho an'ny fanontanina momba ny vokatra na pricelist anay dia mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay. Hanome ny vidiny sy serivisy tsara indrindra izahay.